Mhenderekedzo nyowani yevakadzi-chete muBangladesh yakavhara maawa mushure mekuvhurwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Bangladesh Kuputsa Nhau » Mhenderekedzo nyowani yevakadzi-chete muBangladesh yakavhara maawa mushure mekuvhurwa
Bangladesh Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Kodzero Dzevanhu • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Vati wandei vevashandisi vesocial media vakarasa danho iri, vachipomera hutungamiriri hwenzvimbo iyi yekusarura vanhukadzi uye nekuzvipira kune vechiIslam.
Nzvimbo yakasarudzika yevakadzi nevana yakanga yasenderwa parutivi muBangladeshi nzvimbo huru yekushanya ichizongoraswa maawa mashoma mushure mekuvhurwa.
Zviremera zveBangladeshi zvakakurumidza kudzokera kumashure pasarudzo yavo yekusarudza nzvimbo yemahombekombe yevakadzi chete paCox's Bazar Beach mushure mekunge vashandisi vesocial media vavaenzanisa neTaliban.
Nzvimbo yakatsaurirwa yevakadzi yakanga yamiswa patambo refu kwazvo pasirese, inosvika makiromita zana nemakumi maviri (120 mamaira) - uye chikwangwani chikuru chakamiswa mujecha kuzivisa vanoenda kumahombekombe nezvemitemo mitsva.
Maererano nomumwe mukuru mukuru womunzvimbomo, vakadzi vomunzvimbomo vakanga “vakumbira nzvimbo yakatsaurirwa yemhenderekedzo yegungwa nokuda kwavo vamene, nemhaka yokuti vainzwa vachinyara uye vasina kuchengeteka munzvimbo ine vanhu vakawanda.”
Danho iri rakaitwa zvichitevera kubatwa chibharo kwakaitwa mumwe mukadzi muCox's Bazar svondo rapfuura, izvo zvakakonzera kushushikana nezvekuchengetedzwa kwenzvimbo iyi, iyo inoshanyirwa nevashanyi vekunze neveko. Zvisinei, maawa akati kuti gare gare, nzvimbo yevakadzi chete yaifanira kubviswa.
"Iyi iTalebistan," mutori wenhau ane mukurumbira Syed Ishtiaque Reza akazivisa paFacebook, achireva Taliban boka remagandanga, iro ranga richiisa mitemo yakaomarara yechiIslam pamaitiro evakadzi kubva pavakabvuta masimba muAfghanistan.
Vamwe vazhinji vakasimbirirawo kuti zviremera hazvifanire kuzvipira kumapoka akaomarara echiIslam anga achiita misangano. Bhangiradheshi mumakore achangopfuura uye zvinoda kupatsanurwa kwevanhukadzi munzvimbo dzebasa.
Vakuru venzvimbo vakazoburitsa chirevo vachiti danho rakanga "rabviswa" pamusoro pezvavakatsanangura se "zvisina kunaka".
Bhangiradheshi inyika yechiMuslim ine mamiriyoni 161, ine vanhu vakawanda vanochengetedza.
Ndira 1, 2022 pa00: 49
Imbama yakadini kuvakadzi vaikumbira kuchengetedzwa! Zvekare, zvinhu zvinoda VAKADZI zvinodzikisirwa zvorambwa neVARUME!
Ndinovimba manejimendi enzvimbo yekutandarira anozofungazve izvi uye voona zvavakaita ndizvo zvakapesana neizvo zvinopomerwa nemasocial media idiots. (Taliban yaisatendera chero munhu kuti anakirwe pamahombekombe - ndoda vakadzi!)
Ndinotsigira zvakazara vakadzi vanoda nharaunda yavo yegungwa - Mwari anoziva nedzvinyiriro dzose dzokugara pakati pevabhinya dzavanoda kune imwe nzvimbo kunze kwevarume kwavanogona kuzorora, uye kurega zuva richivarapisa, uye kushambira pasina kunetseka kuti vachaoneswa kana kuti kunetswa.